Mila Fampianarana Ara-Pananahana Ve i Tajikistan? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Marsa 2015 15:40 GMT
Vakio amin'ny teny Español, čeština , 繁體中文, 简体中文, Français, 日本語, Türkçe, English
Iray amin'ireo asa farany tao amin'ny antenimeram-pirenena Tajikistan ny fandaniana ny lalàna ahitana lesona ara-pananahana ao anatin'ny fandaharam-pianaran'ny sekoly ambaratonga faharoa ao amin'ny firenena. Nanambara ireo mpikambana ao amin'ny antenimieram-pirenena fa hanentana ny zatovo mikasika ny aretina azo avy amin'ny firaisam-batana ireo lesona ary hisoroka ny vohoka tsy nirina ao amin'ny firenena Azia Afovoany mpandala ny nentim-paharazana.
Ehsan nanoratra hoe:
Zava-dehibe hoan'ny fianakaviana Tajik ny mahavirijiny ny zazavavy. Tamin'ny taon-dasa, nanao fandresen-dahatra lalàna manery ny hanaovana fizahana ny maha-virijiny ny tovovavy ny vondrona ‘manam-pahaizana ara-pitsaboana’ avy ao amin'ny faritra iray ao amin'ny firenena mba hiarovana ny firenena amin'ireo karazana aretina ara-tsosialy, indrindra ny fanambadiana miafara amin'ny fisarahana. Tsy nolanian'ny parlemanta ny lalàna.
Saihuja Abdurahmon nanoratra hoe:
Hoy ny heviny: